जर्मनीको एनआरएनए अध्यक्षमा रोस्यारा निर्वाचित – Gulmiews
जर्मनीको एनआरएनए अध्यक्षमा रोस्यारा निर्वाचित
२१ भाद्र २०७२, सोमबार १५:०८ Sanju Kauchha
No comments	जर्मनी । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)जर्मनीको अध्यक्षमा नवराज रोस्यारा निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी उपाध्यक्षमा रणबहादुर साउद, प्रेम पोमु र नारायण अधिकारी निर्वाचित भए भने महासचिवमा प्रेम सिंह गुरुङ, सचिवमा कृष्ण देबकोटा निर्वाचित भएका छन् ।
कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता भने पछि चयन गरिने निर्वाचन अधिकृत सन्तोषकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । शनिबार सम्पन्न सम्मेलनले एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय को–अर्डिनेसन कमिटीको सदस्य पदमा सुरेन्द्र प्रधानलाई चयन गरेको छ।
त्यस्तै महिला प्रतिनिधि इम्प्रेस सिंह, युवा प्रतिनिधि डा. जयकृष्ण ठाकुर, इभेन्ट को–अर्डिनेटरमा बेल गुरुङ चुनिएका छन् । यसैगरी सदस्यमा विजय शाही, केदारप्रसाद गजुरेल, मीलन पन्त, काजी राणा, दिनेश गौतम निर्वाचित भएका छन् । प्रमुख संरक्षकमा आइसीसीका उम्मेदवार रहेका बिनोद अधिकारीलाई चयन गरिएको छ । सम्मेलनको उद्घाटन जर्मनीको लागि नेपालका कार्यबाहक राजदूत प्रकाशमणी पौडेलले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता तथा सभासद शेरधन रार्इ, आइसीसीका महासचिव कुमार पन्त लगायतले शुभकामना ब्यक्त गरेका थिए ।जर्मनी र नेपाली भाषामा सन्चालन गरिएको कार्यक्रममा नेपालमा सहयोग पुर्याउदै आएकी डा. सीबीले केलर लगायत जर्मन नागरिकहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।